Power Supply ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ - China Power Supply Factory
အသားတင်အလေးချိန် - ၆၃.၃ ဂရမ်အရွယ်အစား - ၇၅ မီလီမီတာ (အရှည်) * ၃၂ မီလီမီတာ (အကျယ် - အထူ) * ၅၅ မီလီမီတာ (အမြင့်) ထုပ်ပိုးမှု - အပေါ်နှင့်အောက်အဖုံးအကွက် + ပါဝါကြိုးအရောင် - ရွှေ၊ အနီရောင်၊ အနက်ရောင်အညွှန်းကိန်း - ၁။ interface: DC + RCA interface ၂။ ပစ္စည်း - အလူမီနီယမ်အလွိုင်း ၃။ လီသီယမ်ဘက်ထရီ - ၃၅၅၀ mAh လီသီယမ်ဘက်ထရီများ ၄။ အားသွင်းချိန်: အစာရှောင်ခြင်းအားသွင်းခြင်း၊ ၁.၅ - ၂ နာရီအပြည့်အားသွင်းနိုင်သည်။ ၅။ အသုံးဝင်သောအချိန် - ပုံမှန် ၁၀ ဗို့အားအောက်တွင်တည်ငြိမ်သောဗို့အားသည် ၄ ​​နာရီကြာနိုင်သည်။ 8V ဗို့အားအောက်တွင် ၄ နာရီကျော်အသုံးပြုနိုင်သည်၊ ဗို့အားတည်ငြိမ်သည်။ Ins ...
Control Models နှစ်ခု Tattoo စက်များအတွက် Digital Power အရင်းအမြစ် Multifunctional Red Skull Tattoo Power Supply ၁။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစနစ်တွင်အချိန်ခလုတ်၊ စတင်ရန်နှင့်ရပ်တန့်ရန်ကိုနှိပ်ပါ။ ၃ စက္ကန့်ကိုသုညအထိသုညအထိနှိပ်ခြင်း။ ၂ ။ စဉ်ဆက်မပြတ်ဗို့အား add နှင့်နုတ်။ ၃။ Switch to long step and jog dual mode ကိုသုံးပါ။ 4. စတုတ္ထအမိန့်ဗို့အား၏အလုပ်ကိုကယ်တင်ရန်ခလုတ်လေးခုကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ၅။ Dual mode ပြောင်းလဲခြင်း 6. Memory function 7. Timing function MOLONG TATTOO SU ...
အရည်အသွေးမြင့်ထွင်းထုထားသောပုံစံများ Tattoo Power မချောသော Multifunctional Digital Tattoo Power Supply
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: ထွင်းထုသောလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထောက်ပံ့မှုပစ္စည်း - သွပ်သတ္တုစပ်အရောင် - ရွှေ၊ မီးခိုးရောင်၊ အလွိုင်းစုစုပေါင်းအလေးချိန် - ၈၅၀ ဂရမ်ထွက်ရှိမှုလက်ရှိ ၃ ဒသမ ၄ ဗို့အားထွက်သောဗို့အား - ၀ ၁၈ - ၁၈ ဗို့ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ - ၁ adapter, 1 ကြိုးကြိုးအသုံးပြုရန်အတွက်ညွှန်ကြားချက်များ - ၁ ။ ဗို့အားသည် ၁၈ မှ ၁၈ ထိဖြစ်ပြီး၊ ၂. output current သည် 3.4 amperes; ၃။ တက်တူးထိုးစက်နှစ်ခုကိုဆက်သွယ်နိုင်သည်၊ တစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်နေပြီးနောက်တစ်ခုမှာအဆင်သင့်ဖြစ်သည်။ switch ကို ၂ စက္ကန့်လောက်ဖိထားပြီးကိုင်ထားပါ၊ သက်ဆိုင်ရာ၏အစိမ်းရောင်ညွှန်ပြမီးသည် ...
ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား၊ 7.5 * 7.5 * 4.5cm သေတ္တာအရွယ်အစား; 17.5 * 11.5 * 8cm အသားတင်အလေးချိန်; ၁၇၈ ဂရမ်စုစုပေါင်းအလေးချိန်၊ 416g ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များ - power supply + adapter + plug product လက်စွဲ - ၁: အရောင်ခုနစ်လုံးပါသော tattoo lamp ၏ power supply၊ key-start တစ်ခု၊ ခြေနင်းမလိုအပ်၊ ပိုမိုအဆင်ပြေလွယ်ကူစေရန်။ ၂။ ဗို့အားကိုချိန်ညှိရန်ဘယ်နှင့်ညာသို့လှည့်ပါ။ မတူညီသောအရောင်များသည်မတူညီသောဗို့အားများကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ၃။ ရော်ဘာချော်ခြင်းမရှိသောအခြေအနေ၊ ပါ ၀ င်သည့်သံလိုက်၊ ခိုင်ခံ့သောစုတ်ယူခြင်း၊ နေရာအမျိုးမျိုးအတွက်သင့်တော်သည်။ 4: အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့မီးအိမ်ဒီဇိုင်း၊
LCD display ပါသော Locomotive Digital Dual Power Supply
ဒီဂျစ်တယ် dual စက်တက်တူးထိုးစွမ်းအားကို LCD မျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ထားသည်။ တက်တူးထိုးစက်များလည်ပတ်ရန်စွမ်းအားနှင့်တည်ငြိမ်သောလျှပ်စစ်ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ အပူလွန်ကဲသောစွမ်းဆောင်ရည်သည်ကြာရှည်စွာအလုပ်လုပ်သည်။ Gradient LCD display သည်အလုပ်လုပ်နေစဉ်ဖတ်ရန်လွယ်ကူသည်။ မြန်နှုန်းထိန်းချုပ်မှုအတွက်အဆင်ပြေသောခလုတ်။ Package Include: 1 x Tattoo Machine Power Supply ၁ x Power Plug (သင့်နိုင်ငံများနှင့်အံဝင်ဂွင်ကျဖြစ်စေရန်) ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်နှစ်ပေါင်းများစွာတက်တူးထိုးကွင်း၌အထူးကျွမ်းကျင်ပြီးအရည်အသွေးမြင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပစ္စည်းကိရိယာများ၊
ဒီဂျစ်တယ်စွမ်းအင်အရင်းအမြစ် Standard Precision HP-2 Tattoo Power Supply
ကွိုင်စက်များနှင့်မော်တာစက်များနှင့်လိုက်ဖက်သောကြောင့်၎င်းသည်တည်ငြိမ်စွာ၊ ချောချောမွေ့မွေ့နှင့်ချုပ်ရိုးမပါဘဲအလုပ်လုပ်သည်။ ၎င်းသည်သတ္တုစားပွဲပေါ်တွင်စုပ်ယူနိုင်သောအရည်အသွေးမြင့်အလူမီနီယမ်အလွိုင်းကွင်းခတ်များ၊ စုတ်တံများနှင့်မြင့်မားသောသံလိုက်သံမဏိစုတ်ယူသည့်ဘုတ်များတပ်ဆင်ထားသည်။ အသွင်အပြင်လက္ခဏာများ - ဒစ်ဂျစ်တယ်မိုက်ခရိုပရိုဆက်ဆာထိန်းချုပ်မှု၊ အသုံးပြုရန်လွယ်ကူသည်။ သတ်မှတ်ထားဗို့အား 0-18vdc ၏ဒဏ်ငွေညှိနှိုင်းမှု။ ၂.၃ Ampere တွင်ပါ ၀ င်သည့် overload protection သည်တက်တူးထိုးခြင်း၏လုံခြုံမှုကိုသေချာစေသည်။ Liner / Shader ကိုစက် ၂ လုံးသို့မဟုတ်စက် ၄ လုံးဖြင့်တပ်ဆင်ထားသည်။